Waligay Isma Lahayn Holland Baa Spain Sidaas U Galli – van Gaal
HomeWararka MaantaWaligay Isma Lahayn Holland Baa Spain Sidaas U Galli – van Gaal
Tababaraha rayn raynta iyo damaashaadka ku jira ee Luis Van Gaal oo xulkiisu guuldaro taariikhi ah baday qaranka Spain , ayaa tilmaamay inaanu ku seexan kuna soo toosin in xulka qarankiisu 5-1 ku tirtiri karo xulka awooda badan ee Spanishka.
“Damaashaadkii ugu fiicnaa wuxuu ka dhex dhacay garoonka dhexdiisa. Qof kastaa wuxuu ahaa mid faraxsan. Qofna kuma riyoon inay tani dhacayso,” ayuu ku yidhi warfidiyaha NOS.
“Markii aanu joognay qolka nasashada , waxaa khudabadeeyey Kabtanka [Van Persie] waxa kaloo hadal jeediyey Sneijder.
“Waligay kuma fikirin in sidan wax u dhacayaan. Markii Spain rigoodhaha dhashatay, waxaan is weydiiyey tolow caawa xaalku ma sidaasu ku dhamaanayaa? Ah in xulka haysta koob aduunkii u dambeeyey uu sidaas ku badiyo?’.
“Waxaan ku mashquul Sanaa wixii aan samayn lahaa qaybta dambe. Iyadoo wali 1-0 ah ayaanu u baxnay nasashadii, Waxaan ku soo galliyey shaxda 4-3-3 si aan cadaadiska kubada ugu sii hayo.
“Intaa kadib Robin ayaaba gool noo dhaliyey. Kubadaas oo uu u madaxeeyey si dareen lahayd. Wuu sii ogaa ka hor. Wuxuu sii halacsaday gool wadaha oo woxogaa ka soo horeeya diilintiisii. Wuxuu ahaa gool aad u qurux badan.”
Markii uu shabaqa dhigay kubadaas , Van Persie wuxuu u cararay dhinaca tababaraha si uu ugu dhufto gacanta astaanta loo yaqaano ‘high five’.
“Waa arin heer sare ah inuu ciyaaryahano talaabadaas oo kale ku dhaqaaqo,” ayuu yidhi Van Gaal. “Waa calaamad qadarin u taagan, oo had iyo jeer dadku sameeyo.”
Schweinsteiger waa mar la arag- Sammer